टिकटक विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप | Nepalkakura
Home गृहपृष्ठ मनोरञ्जन टिकटक विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप
टिकटक विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप
टिकटक विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप बनेको छ ।
फेसबुक तथा इन्स्टाग्राम लगायतका चर्चित एपहरुलाई पछि पार्दै टिकट सर्वा्धिक डाउनलोड हुने एप बन्न सफल भएको हो ।
एप एनालिटिक्स प्लाटफर्म सेन्सर टावरको रिपोर्ट अनुसार गत सेप्टेम्बर महिनामा विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएका सोसल मिडिया एपमध्ये टिकटक पहिलो नम्बरमा रहेको छ । केवल गुगलको प्लेस्टोरमा मात्र नभै एप्पलको एप स्टोरमा समेत टिकटक नै सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप बनेको हो । फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता सोसल मिडिया एपहरु डाउनलोड संख्याको आधारमा टिकटक भन्दा पछि परेका छन् ।
रिपोर्ट अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा मात्रै टिकटक ६ करोड पटक डाउनलोड भयो । अर्को रोचक तथ्य त के भने यस अवधिमा टिकटक सबैभन्दा धेरै पटक भारतमा डाउनलोड भएको छ । कूल डाउनलोड मध्ये भारतमा झण्डै आधा अर्थात् ४४ प्रतिशत डाउनलोड भएको छ भने अमेरिकाको हिस्सा ८ प्रतिशत रहेको छ ।
दोश्रो स्थानमा रहेको फेसबुकको एप सेप्टेम्बर महिनामा विश्वमा ५ करोड ५ लाख पटक डाउनलोड भयो । फेसबुक पनि यस अवधिमा भारतमा नै सबैभन्दा धेरै पटक डाउनलोड भयो भने । सेप्टेम्बर महिनामा कूल डाउनलोडको २३ प्रतिशत भारतमा भएको छ भने दोश्रो स्थानमा रहेको इण्डोनेसियामा ११ प्रतिशत डाउनलोड भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एपहरुमध्ये टप फाइभमा इन्स्टाग्राम, लाइकी तथा स्नापच्याट रहेका छन् ।
त्यस्तै हेलो छैटौँ स्थानमा रहँदा ट्वीटर सातौँ, पिन्ट्रेस्ट आठौँ, हागो नबौँ र बिगो लाइभ दशौँ स्थानमा रहेको छ ।
गुगल प्ले स्टोर र एपलको एपस्टोरका टपटेन डाउनलोड भएका एपहरु चाहिँ यस्ता छन्ः
इन्स्टाग्राम, फेसबुक. स्नापच्याट,ट्वीटर. पिन्ट्रेस्ट,विच्याट,क्यू क्यू.लिंक्डइन,डिस्कोर्ड
फेसबुक, लाइकी,इन्स्टाग्राम,स्नापच्याट,ह्वेलो, ह्वागो,ट्वीटर, पिन्ट्रेस्ट,बिगो लाइभ
Previous articleकारबाहीमा चर्चित र्‍यापर भिटेन
Next articleसलमान खान र सोनाक्षी सिन्हाको फिल्म ‘दबंग ३’ को ट्रेलर सार्वजनिक